Blog | Hein Htet Kyaw
Bootable Stick လုပ်ဖို့အတွက် Software တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ကျွန်တော့လို ရှည်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ Command Prompt ကနေပြီးတစ်ဆင့် လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ အတွက် နည်းလမ်းလေး ပေးလိုက်ပါတယ်။ Software တွေနဲ့လုပ်ရင်လဲ ရတယ်ဆိုပေမယ့် မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက် Share ပေးချင်တာကတော့ . . . အရင်ဦးဆုံး Command Prompt လေးကို Right Click ထောက်ပြီး Run as Administrator လေးကို လုပ်လိုက်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ Box လေးမှာ Yes လေးနှိပ်ပေးလိုက်ရင် Command Prompt Box လေးပေါ်လာပြီပေါ့ :3 ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ Memory Stick လေးကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Command Prompt box မှာ diskpart လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ Window Built-in ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ diskpart Software ကိုခေါ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။ အဲဒါပြီးသွားရင်တော့ list disk လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ HDD ကော Memory Stick တွေကိုကော Listing လုပ်တဲ့သဘောပေါ့။ အဲဒါပြီးသွားရင်တော့ …
ကျွန်တော်တို့ များသောအားဖြင့် Page အသစ်လုပ်ပြီး အဲဒီ Page ကို ကိုယ့် Timeline ထဲက Work မှာ ပြန်ထည့်ချင်ရင် ပြန်ရှာလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းလေးရှာပြီး လာသိမ်းထားတာပေါ့ xD အရင်ဦးဆုံး ကိုယ့် Timeline ထဲက About ကိုသွားပြီး Overview အောက်က Work and Education ဆိုတဲ့နေရာမှာ တွေ့တဲ့ Page တစ်ခုကို ထည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ Company Name နေရာကို Right Click ထောက်ပြီး Inspect Element ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ value အကွက်လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ Page ID ကို ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါပြီ။ Page ID ကိုတော့ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ Facebook Page ထဲက About မှာကြည့်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ ပြီးသွားရင် Position မှာတော့ ကိုယ်တကယ်ထည့်ချင်တဲ့ Position ကို ထည့်ပြီး အခြား Information တွေကို လိုအပ်သလိုထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Save Changes ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ကိုယ်ပြောင်းလဲချင်တဲ့ …
Website ကြီးဝယ်ပြီး ဘာမှ မရေးဖြစ်တာလဲ ကြာပြီ ဆိုတော့ Domain က နှမြောဖို့ကောင်းနေကောပဲ . . . ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှာ အရေးကြီးတာကတော့ Window တစ်ခုတင်ဖို့က လူတိုင်းလိုလိုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်း တစ်ခုလိုကို ဖြစ်နေပြန်တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရတော့ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Window XP တွေ7တို့ Support ကို အပြည့်အဝမရတော့တဲ့အတွက် . . . Window 8 ကလဲ ကွန်ပျူတာတိုင်းနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့အတွက်၊ Windows 10 က နောက်ဆုံး Version တိုင်းကို Update ရတဲ့ အတွက် xD ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး Window ကိုပြောပါဆိုရင် Windows 10 ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး Version တိုင်းကို Update ရသလို License Key ဆိုသည်မှာလဲ အခုအချိန်အထိ အဆင်ပြေနေသေးတဲ့အတွက် သုံးဖြစ်နေသေးတယ်လို့ပြောကမှာပေါ့။ Windows 10 သုံးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက Window Update လေးတွေကို ရတာ ကျေနပ်မှုမျိုး ဘာနဲ့မှ လဲလို့မရဘူးဆိုသလိုပေါ့ဗျာ။ အရင်တုန်းကအချိန်တွေ …
ရှာလေတွေ့လေပေါ့လေ :3 စောစောကတွေ့ခဲ့ရင် အကောင်းသား အခုတော့ နောက်ကျသွားပြီပေါ့လေ။ ၂ ခါမောရအုံးမယ် xD !! Linux သုံးပြီးတော့ HDD ကို External HDD အဖြစ် Data Backup လောက်ပဲလုပ်ပါတော့မယ်လေဆိုပြီးတော့ Data တွေ သိမ်းထားခဲ့တယ်ပေါ့လေ … အစပိုင်းမှာတော့ တိုင်မပတ်ဘူး :3 ဖြစ်ချင်တော့ တစ်နေ့မှာပဲ ကသစ်က Blu-ray Movie တွေရှိတယ် ယူမလားဆိုပြီးပြောတော့ ယူမယ်ဆိုပြီး အားရပါးရသွားလိုက်ကောပေါ့လေ :3 Copy ကူးမယ်လဲလုပ်ကော၊ ။ FAT 32 ဖြစ်နေတော့4GB Or Large File တွေ ကူးမရဘူးဖြစ်နေတယ် OMG !!! Fat 32 ဟာ Linux တွေမှာအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် … Window လိုမျိုးနေရာပဲဖြစ်ဖြစ် File Storage အဖြစ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့ တိုင်ပတ်တော့တာပေါ့လေ။ NTFS အကြောင်းနဲ့ FAT 32 အကြောင်းကိုတော့ Wikipedia မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့လေ !! File တွေကို တစ်နေရာမှာ ကူးပြီးတော့ ပြန်သွင်းရမှာဆိုတော့ အချိန်တွေကုန်မယ် စက်လဲ ပင်ပန်းတယ်ပေါ့လေ …
Facebook သုံးပြီး အချိန်ဖြုန်းနေမယ့် အစားတစ်ခုခုလုပ်သင့်တယ်ထင်တာနဲ့ပဲ Forum လေးရေးကြည့်နေတယ်ပေါ့လေ xD Forum ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Facebook သုံးပြီး အလကား စောက်ပေါတွေနဲ့ မနေချင်တာကြောင့် သီးသန့် သဘောမျိုးနဲ့ Knowledge Sharing လုပ်ကြမလားပေါ့လေ။ Short to the point ဖြစ်မယ်၊ အခက်အခဲရှိရင် ချက်ခြင်း ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ပေါ့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ချင်တာပေါ့လေ။ ဖြစ်ချင်တော့ Unicode နဲ့ Zawgyi ဆိုပြီးတော့ နှစ်ခြမ်းကွဲနေပြန်တယ် -,- ( Thank God ) လုပ်ဖြစ်ရင်တော့ Unicode သီးသန့်ပဲသုံးစေချင်တယ်ပေါ့လေ။ ဆိုပေမယ့်လဲ ယူနီကုဒ် သီးသန့်ဆိုရင် Active Member တွေကမရှိသလောက်ရှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သဲထဲရေသွန်သလိုဖြစ်ရမယ် … ဒါကြောင့်လဲ Can’t online လို့ပြောတာပေါ့ :3 Active Member မရှိ Staff တွေမရှိပဲနဲ့တော့ Online က Active ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ ရှိပြီးသားဟာတွေတောင် သေသလိုဖြစ်နေတာဆိုလေတော့လဲ အပျော်သဘောနဲ့ပဲ Bill ကုန်ခံပြီး Error တွေရှင်းလိုက် ရေးလိုက် လိုအပ်တာတွေကိုထည့်လိုက်ပေါ့လေ !! Forum ကို Taste …